यी हुन् तिहारका मीठा र रंगीन मिठाईका तीता अवगुणहरु ! - Himalayan Kangaroo
यी हुन् तिहारका मीठा र रंगीन मिठाईका तीता अवगुणहरु !
Posted by Himalayan Kangaroo | ११ कार्तिक २०७३, बिहीबार १५:११ |
काठमाडौं । गुलियो जहाँ मन भुलियो त्यहाँ । हुन पनि तिहार फलफुलको मात्र नभई मिठाईको चाड पनि हो । हाम्रो चाडपर्व पनि गजवका छन । दशैंमा खाएको मासु र बोसो तिहारमा मिठाईले पखाल्नु पर्ने । स्वास्थ्यका लागि मासु र मिठाई दुवै हितकर मानिन्न । त्यसमाथि पनि चाडवाडको समयमा यी दुवै खाद्य वस्तुको प्रयोग आम नेपालीले निर्भिकताका साथ गर्ने गर्छन । जुन स्वास्थ्यका लागि घातक मात्र नभई अति घातक मानिन्छ ।
तिहारमा विभिन्न प्रकारका मिठाई एवं मिठाईजन्य परिकार खाने र ख्वाउने चलन छ । मिठाई प्रायः मैदा, दूध वा दुग्ध पदार्थ, चिनी, घिउ, तेल आदिबाट तयार पारिन्छ । मिठाईका यस्ता परिकारलाई चिल्लो पदार्थ, प्रोटिन तथा कार्बोहाइड्रेडमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ । तिहारमा घरमा बनाइएको मिठाईमा होस् वा बजारबाट किनिएको होस् । प्रायः मिसावट गरिएका खाद्य पदार्थ प्रयोग भएको पाइन्छ। मिठाईमा विभिन्न रंगसमेत प्रयोग हुन्छ। यस्ता मिठाईहरू आकर्षक भए पनि विभिन्न रोग निम्त्याउने खालका हुन्छन्। कतिपय मिठाईर्मा रातो रंग हालिएको पाइन्छ। रातो रंगका लागि फास्टरेड कार्मोइसिन नामक रसायन प्रयोग गरिन्छ, जसले रगतलाई रातो बनाउने हेलोग्लोबिनमा क्षति पुर्याउनुका साथै रक्तअल्पताजस्तो रोगसमेत निम्त्याउँछ। त्यस्तै पहेंलो रंगका लागि सेन्सेटको एफसीएफ प्रयोग गरिन्छ। त्यसले शरीरमा प्रतिकूल असर पुर्याउछ ।
त्यसैगरी अधिकांश पेयपदार्थको रंग एवं बाक्लोपनलाई सुरक्षित राख्न ब्रोभिनेटेड तेल प्रयोग गरिन्छ । यसले मानिसहरूमा बाँझोपन ल्याउने खतरा हुन्छ। मिठाईमा जथाभावी विभिन्न रंग प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने हुँदा यस्ता मिठाई बनाउँदा खान हुने र नहुने रंगको जानकारी राखी उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ। त्यसो त मिठाईमा प्रयोग गरिने सबै प्रकारका रंग स्वास्थ्यका लागि हानिकारक नै हुन्छन् भन्ने छैन। आवश्यकताभन्दा बढी प्रयोग गरिँदा सामान्य मिठाई पनि विषाक्त हुनपुग्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार मानिसलाई लाग्ने विभिन्न रोगमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी रोगको कारण असुरक्षित खाद्यपदार्थ नै हो ।
शरीरका लागि आवश्यक पर्नेभन्दा बढी चिल्लो खाए त्यो शरीरमा जम्मा हुन थाल्छ र त्यसबाट बोसोको मात्रा बढी भएर शरीर मोटो र थिलथिलो हुन्छ। त्यति मात्र नभई चिल्लो बढी भएका खानेकुरा खाँदा ग्याष्टिक, उच्च रक्तचाप, हृदयघातजस्ता घातक रोग उत्पन्न हुन सक्छन्। त्यसैले चाडपर्वहरूमा बजारबाट मिठाई खरिद गर्दा अथवा घरमै बनाउँदा पनि होस पु¥याउन आवश्यक छ । जस्ले चाडवाड र सवैको स्वास्थ्यलाई स्वादिलो बनाओस ।
Previousनेपाल र भारतबीच भएको पछिल्लो सम्झौता यस्तो छ
Nextकार्कीविरुद्धको महाभियोग भारतको इशारामा आएको खुलासा
दिउँसो बारम्बार झकाउनु,फाइदा कि बेफाइदा ?
२७ भाद्र २०७६, शुक्रबार ०२:५०
२९ चैत्र २०७३, मंगलवार ०१:५७
रातारात सेलिब्रेटी बनेकी नेपाली ‘तरकारीवाली’की परिचय खुल्यो
१७ कार्तिक २०७३, बुधबार १६:१०